10 Amathiphu Wokuvakasha EChina Ngesitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > 10 Amathiphu Wokuvakasha EChina Ngesitimela
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 22/01/2021)
Yesiko neyesimanje, kuthulekile futhi kuyaphithizela, I-China ingelinye lamazwe athakazelisa kakhulu ongayihlola, ikakhulukazi ngesitimela. Ukuhlela uhambo oluya eChina kungaba nzima kakhulu, ngakho-ke sihlangene 10 amathiphu okuthi ungaya kanjani eChina ngesitimela.
Kusuka ekupakisheni kuya ekubhukheni amathikithi esitimela, lezi 10 amathiphu okuya eChina ngesitimela, izohlunga noma yikuphi ukudideka, futhi uqinisekise i-adventure enhle kakhulu.
1. Ithiphu Yendlela Yokuhamba I-China Ngesitimela: Do Your Research
EChina, uzothola kukhona 2 izinhlobo zezitimela: Izitimela ezinejubane eliphezulu nezendabuko. Kubalulekile ukuthi wenze ucwaningo lwakho kusengaphambili, ukuqonda ukuthi yini okusebenzela kangcono i- isabelomali sohambo, uhlobo lohambo, isikhathi, nezinga lokuthuthuka. Kubaluleke kakhulu uma kunjalo ukuhamba nezingane.
Izitimela zaseChina - Izitimela ezihamba ngesivinini esiphezulu zibalwe ngo-G, D, noma uC, egijima ngejubane eliphezulu le- 350 km / h. ifakwe izihlalo zebhizinisi / i-VIP noma izihlalo zokuqala.
Izitimela zendabuko ezinesihloko esithi L, K abadumile, futhi unikele ngezihlalo ezinzima, abalala kanzima noma abathambile, kanye nokulala okuthambile kwe-deluxe. Ukuhamba e- 160 km h ashibhile.
2. Ithiphu Yendlela Yokuhamba I-China Ngesitimela: Bhuka Ikilasi Lesitimela Esilungile
Izitimela eChina zinezigaba ezine: Isihlalo esinzima, isihlalo esithambile, ukulala kanzima, ukulala okuthambile.
Isihlalo esinzima: Yisigaba sesitimela esishibhile, futhi kukhona ngokuvamile 5 izihlalo ngomugqa. Ngakho, uma uhamba ngesabelomali, lokhu kuyindlela ethandwa kakhulu, kepha cabanga ukuthi futhi kuyindlela ejwayelekile kakhulu phakathi kwamaShayina. Ngakho-ke, ungahle ungene endaweni enomsindo kakhulu futhi egcwele uhambo ngesitimela.
Ukulala kahle: ithambe kancane futhi inezinga eliphakeme lamathikithi esitimela, kepha ngikhululeke ngokwengeziwe.
Ukulala kanzima: 6 indawo yokuhlala, futhi awukho umnyango wobumfihlo noma wokuhlukaniswa namanye amagumbi.
Ukulala kahle: ikilasi lesitimela elihle kunazo zonke ezitimeleni zaseChina, futhi kunconyelwe kakhulu lolo hambo lwesitimela olude. Kuyindlela ebiza kakhulu, kodwa uzoba segunjini elingalodwa, ka 4 uyalala, nangamasokhethi kagesi womuntu siqu. Uma niyizithandani ezijikelezayo, lapho-ke i-deluxe izokulungela.
3. Fika Esiteshini Sesitimela Kusengaphambili
Iziteshi zezitimela ezimatasa kakhulu eChina yizona ezinkulu kakhulu, kunesiphithiphithi, futhi kuzofaka nezinqubo zemithwalo ye-x-ray. Ngakho-ke, kufanele ufike okungenani 40 imizuzu ngaphambi kwesikhathi sakho sokuhamba kwesitimela. Ngale ndlela, uzoba nesikhathi esanele sokulawulwa kwepasipoti, ukuhlolwa kokuphepha, bese uthola ipulatifomu yesitimela.
4. Pakisha Ungadla Neziphuzo
Ukudla neziphuzo okusemkhunjini kungabiza kakhulu, kunangesikhathi uthenga edolobheni. Ngakho, kungcono uzilungiselele kusengaphambili, futhi uthenge ukudla neziphuzo ngaphambi kwesikhathi, futhi ungathengi ukudla okulula ngentengo ezinqoleni zokudla esitimeleni. Izithelo ezintsha, sandwich, futhi ne-KFC ingukudla okulula kakhulu kohambo lwakho lwesitimela eChina izitimela ngesivinini.
5. Ithiphu Yendlela Yokuhamba I-China Ngesitimela: Phakamisa isikhwama sakho sezindlu zangasese kahle
Izikhungo zezitimela ezinejubane elikhulu nezinhlamvu eChina zisesimanjemanje impela. Mhlawumbe uzothola izindlu zangasese ezimfushane nezesimanje kuzo zonke izitimela. Nokho, kungcono upakishe iphepha lakho langasese, njengoba lokhu kuvame ukuphela ngokushesha okukhulu kulezo zitimela ezisheshayo. Ngaphezu kwalokho, akuzona zonke izitimela ezinamakamelo okugeza, ngakho-ke phakamisa izesuli ezimanzi uma kungenzeka, ukuhlala uhlanzekile, futhi ibhodlela le-shampoo yokuhamba kanye nensipho.
6. Gqoka Izinhla
Ukugqoka izingqimba kuhlale kungumqondo omuhle wokuhamba ngesitimela, njengoba ungeke ulinganisele i-AC ezitimeleni. Futhi, uma wabelana ngendlwana yakho, ngeke ube yindawo ekhethiwe yokushintsha, futhi ukugqoka izendlalelo kusho ukuthi uzokulungela ukuzijabulisa, qhubeka uqhubeke izitimela zokulala, nanoma yimuphi umgibeli, owesilisa noma owesifazane, ukwabelana ngegumbi lesitimela nawe.
7. iphakethe Khanyisa
Ukugqoka izitimela ezingqimba ezihamba ngethiphu yaseChina kusiholela kwenye ithiphu ebalulekile yokukhanya kokupakisha. Imali ekhokhwayo yezitimela eChina inqunyelwe 20 kg umgibeli ngamunye. Ngenkathi kungekho ukubukwa okuvamile ebhodini, isikhala semithwalo ezitimeleni eChina silinganiselwe impela, ngakho-ke kungcono upake ukukhanya, futhi ugcine imithwalo yakho eduze kwakho, noma uma isikhala sivuma, egumbini lezitimela, esikhundleni sesitoreji semigwaqo yesitimela.
Uma usohambweni ngesikhathi se- Amaholide amaShayina, bese ulungela izitimela ezigcwele. Ngakho-ke, uzofuna ubhaka wakho usondele futhi ubonakale phakathi kwayo yonke imithwalo.
8. Thenga Amathikithi Esitimela Ku-inthanethi
Ungathenga ithikithi lesitimela esiteshini sesitimela, kusuka ezinhlanganweni zokuvakasha, nangehhotela lakho.
Uzothola amanani angcono kakhulu uma uthenga ithikithi lakho lesitimela eChina, inthanethi. Londoloza Isitimela bangakujabulela ukukusiza uthole ithikithi elifanele lohambo lwakho lwesitimela unqamula iChina, ngentengo engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uzothola kulula ukubhuka ithikithi lakho lesitimela kungxenyekazi ekhuluma isiNgisi, kunabamele amaShayina esiteshini sesitimela, ihhotela, noma inkampani yezokuvakasha.
9. Letha okufakwa ezindlebeni
Ngaphandle kokuthi uhlela ukuhamba ngebanga le-1, kufanele ulethe okufakwa ezindlebeni. Izitimela ezihamba ngesivinini esikhulu eChina zithandwa kakhulu ngabantu bendawo, futhi izitimela zendabuko zingaba matasa kakhulu. Ngakho, uma unohambo olude unqamula iChina, phakamisa okokufaka endlebeni ohambweni oluphephile futhi oluzwakalayo.
10. Ithiphu Indlela Yokuhamba I-China Ngesitimela: Bhuka Amathikithi Wakho Esitimela Kusengaphambili
Amathikithi esitimela anesivinini esikhulu eChina athanda ukuphela ngokushesha. Ngakho-ke, kufanele uthenge ithikithi lakho lesitimela okungenani inyanga ngaphambi kwesikhathi. Amathikithi athengiswa kusenesikhathi 30 izinsuku ngaphambi kosuku lokuhamba. Iyahamba ukubhuka kwamathikithi nokuhlela uhambo kumzuzu wokugcina ngu iphutha lokuhamba okufanele uligweme, ikakhulukazi eChina.
Izincwajana zemininingwane travel kuyindlela enhle ukuqala uhambo lwakho eco-friendly yonkana emaphandleni China, emadolobheni, nemibono. Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho uye eChina ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amathiphu ayi-10 Wokuhamba NgeChina Ngesitimela” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travel-china-train%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i-zh-CN iye ku / fr noma / de nangezilimi eziningi.